ဦးဝီရသူပြောတဲ့ ၇+၈+၆=၂၁?? - News @ M-Media
in သုတ၊ရသ / ဆောင်းပါး — April 9, 2013
ဧပြီ- ၈ -၂၀၁၃
ဦးဝီရသူဟာ အဖွဲ့အစည်းအသိုက်အ၀န်း တစ်ခုလုံးကိုပေါ်တင်သမုတ်ပြီး မီဒီယာတွေကြား မဟုတ်တရားတွေကို ဗြောင်ကျကျပြောနေတာဟာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေမှု တစ်ခုပါပဲ။ကျန်တဲ့ ဘယ်ဘာသာဝင်တရားဟောသူကမှ ဒီလိုပြောခွင့်မရကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ ဘားအံမြို့ကအချို့ ဘုန်းကြီးအပါအ၀င် မော်လမြိုင်မြို့က ဘုန်းကြီးတွေကလည်း ဒါမျိုးတွေကို တရားလုပ်ဟောနေကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် မီဒီယာတွေကြား ထင်ရှားကျော်ကြားနေတာကတော့ ဦးဝီရသူပါ။ သူဘာလို့ ဒီလို ဗြောင်ကျကျလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နိုင်ရသလဲ ဆိုတာလည်း အားလုံးသိပြီးသားမို့ မပြောတော့ပါဘူး။ဒါပေမယ့် သူက ၈တန်းလောက် သာသာ ပညာအရည်အချင်းရှိပြီး Freedom of Religion ဆိုတဲ့ ဘသာပေါင်းစုံကို တရားဝင်စော်ကားခွင့် ပါမစ်ရရှိထားသူဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဗဟုသုတအရာမှာ အလွန်ခေါင်းပါးနေကြောင်းပြောပြချင်ရုံပါပဲ။
“ A little knowledge is verydangerous.” တဲ့။ သူ့မှာရှိတဲ့ အင်မတန်ခေါင်းပါးတဲ့ ဗဟုသုတဟာ လူ့အသိုက်အ၀န်း တစ်ရပ်လုံးအတွက်၊သူ့ကို ယုံကြည်မိသူတွေအတွက် တကယ့်အန္တရာယ်တစ်ရပ်ပါပဲ။ ပြောချင်တာကတော့ ဒီလိုပါ….။
ဦးဝီရသူအနေနဲ့ “၇၈၆” ကို ကိန်းဂဏန်းအားဖြင့်“၉၆၉” ထက်သာတယ်လို့ ဘယ်လို အတွေးအခေါ်မျိုးနဲ့ ပြောလည်း ဆိုတာတော့ ကျွန်မ မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ရပ်ကွက်ထဲက နတ်ကတော်ပြောပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ၇+၈+၆ ဟာ ၂၁ ရပါတယ်။ ၉+၆+၉ ဟာ ၂၄ ပါ။ ဒါကြောင့်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုပေါင်းပြီး ရလာဒ်တွေကို စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ နတ်ကတော်တွေလို ပြောရရင်တော့၉+၆+၉= ၂၄ က ပိုသာကြောင်းပါ။
ဦးဝီရသူတို့မှာ ဘာအိုင်ဒီယာမှမရှိဘဲ မွတ်စ်လင်မ်တွေလုပ်တဲ့အတိုင်းခံစစ်နဲ့လုပ်နေတာလို့ ပြောထားပါတယ်။ တဘက်မှာလည်း သူကိုယ်တိုင်ကပဲ ၇+၈+၆= ၂၁ မို့လို့၂၁ရာစုမှာ မွတ်စ်လင်မ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ဖို့လုပ်တယ်လို့ ဂဏန်း၃လုံးကိုအခြေခံတဲ့ အထောက်အထားမဲ့ ဗေဒင်ကို ဟောထားပါသေးတယ်။ “၇၈၆” ဟာ မရိုးဖြောင့်ဘူးလို့ ခံယူထားသလိုပေါ့။ ဒီလိုပဲ တဆက်တည်းမှာပဲ သူက “၉၆၉”ကို ခံစစ်အနေနဲ့ ပြန်လုပ်ရတာလို့ ပြောထားတဲ့အတွက် အင်မတန်မှဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့ ရတနာသုံးပါးရဲ့ သင်္ကေတ “၉၆၉” ဟာ သူတို့ သဘောပိုက်ထားတဲ့ “၇၈၆” နဲ့အဆင့်အတန်းချင်း တူညီသွားတာကိုရော သတိမှထားမိပါလေစလို့ ကျွန်မ တွေးမိပါတယ်။
နောက်ပြီး မွတ်စ်လင်မ်နဲ့ ညားရင် သူ့ဘာသာထဲဝင်ရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်းဦးဝီရသူပြောသွားပါသေးတယ်။ မွတ်စ်လင်မ်နဲ့ယူပြီး အဲ့ဒီမွတ်စ်လင်မ်က ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကိုကူးပြောင်းသွားတာတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ ဦးဝီရသူအနေနဲ့ မြင်ဖူးမယ်လည်း ထင်ပါတယ်။ကျွန်မတို့အစ္စလာမ်ဘာသာဟာ မိရိုးဖလာယုံကြည်မှုတွေကို လက်မခံပါဘူး။ ယုံကြည်မှုဆိုတာ အတင်းအဓမ္မတည်ဆောက်ခိုင်းလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသားပါ။ ဇွတ်အတင်း သွတ်သွင်းတာမျိုးကို ဘာသာဝင်အစစ်တွေ လုံးဝမလုပ်ဘူး ဆိုတာ ကျွန်မတို့က ယုံကြည်ထားပါတယ်။ ကုရ်အာန်ကလည်း သွန်သင်ထားပြီးသားပါ။ နောက်တခုက လူ့အသိုင်းဝန်းတွေမှာBlack Sheep တွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ကို လက်ညှိုးထိုးပြီး ကျန်သူတွေကို စွပ်စွဲတာမျိုးဟာပညာရှိမဆန်တဲ့ ဖြေရှင်းမှုတွေပဲလို့ ကျွန်မ ထင်ပါတယ်။ ဦးဝီရသူရဲ့ source အမှားတွေက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာကြောင့်လို့ထင်မိပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာမကျေနပ်မှုတွေကို မကျေနပ်သူတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ရှင်းတာ ပညာရှိဆန်မယ်ထင်ပါတယ်။
“၇၈၆” ကို တိတိကျကျထုတ်ပြန်ပြီးတော့“၇၈၆” ဟာ ၂၁ရာစုမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ တရားဝင်ကြေငြာပေးရင်“၉၆၉” လှုပ်ရှားမှုကို ရပ်တန့်မယ်လို့ ဦးဝီရသူ ပြောထားပါတယ်။
အဖြေကတော့ ရေရေလည်လည်ကို ရှင်းပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေက ကြေငြာ မပေးနိုင်ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ “၇၈၆” ဟာ မြန်မာမွတ်စ်လင်မ်တွေတီထွင်သုံးစွဲခဲ့တာ မဟုတ်လို့ပါပဲ။ ဦးဝီရသူအနေနဲ့ စာပေတွေကို ဖတ်ရှု့လေ့လာဖို့ ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် http://en.wikipedia.org/wiki/786_%28number%29 ဆိုတဲ့ လင်ခ့်မှာ အလွယ်တကူရှာဖွေဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
“၇၈၆” ရဲ့ သဘောကိုလည်း ရှင်းပြချင်ပါတယ်။“၇” ဆိုတာ ဘာဖြစ်စေ၊ “၈” ဆိုတာက ဘာဂုဏ်၊ “၆” ဆိုတာက ဘာပေါ့ရယ်လို့ ကောက်ကတ်ပေးထားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ မြန်မာမွတ်စ်လင်မ်တွေက မနေ့တနေ့ကမှ (ဥပမာ ၂၀ရာစုကမှပေါ့) တီထွင်သုံးစွဲခဲ့တာလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက် ဦးဝီရသူတောင်းဆိုထားတာကိုတော့ ကျွန်မတို့ မြန်မာ မွတ်စ်လင်မ်တွေက မလိုက်လျောပေးနိုင်တာ ၀မ်းနည်းပါတယ်။ အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန်ရဲ့ သုံးစွဲမှုတွေ ကနေတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ၀င်ရောက်လာတာ ဆိုရင်တော့ငြင်းစရာမရှိပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကလည်း အိန္ဒိယအငွေ့အသက်မကင်းနိုင်တာကို အားလုံးသဘောပေါက်မယ်ထင်လို့အထွေအထူးရှင်းနေစရာမလိုတော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၁ရာစုဆိုတာက ဒီဇင်ဘာ၃၁ရက်၊၂၁၀၀ မှ ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့ အဲ့ဒီအချိန်ထိ “၇၈၆” ကြီးစိုးမစိုးဆိုတာကို စောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့ ဦးဝီရသူရဲ့ မျိုးဆက်သစ်အပေါင်း ကျန်းမာတည်တံ့ပါစေကြောင်းလည်း တဆက်တည်း ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါရစေ။
ရှင်းရမှာက “၇၈၆” ကိစ္စပါ။ “၇၈၆” ဆိုတာဟာ“Bismillah- Al- Rahman- Al- Rahim” ဆိုတဲ့ “ သနားကြင်နာတော်မူသော၊ ဂရုဏာတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ နာမတော်အားဖြင့်” လို့ အနက်ပေးပါတယ်။ ဒါကို googling လုပ်ကြည့်လည်းအလွယ်တကူသိရပါတယ်။
အတွေးအခေါ်၊ အနုပညာနဲ့ ဘာသာဗေဒတွေကို ဂဏန်းကိုယ်စားပြုဖော်ပြတာဟာအီဂျစ်၊ ဘေဘီလုံနဲ့ အိန္ဒိယတို့ရဲ့ တိုးတက်ထွန်းကားခဲ့တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေပါ။ ရှေးခေတ် ဂဏန်းကိုယ်စားပြုမှုတွေကနေတဆင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာဟာ သင်္ချာပညာရပ်၊ ဂျီသြမေတြီနဲ့ တြီဂိုနော်မေတြီတွေ အထိတိုင်အောင်လို့မှတ်သားဖူးပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံးကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ပညာရှင်ကတော့ ပိုင်သာဂိုရပ်စ်ပါ။ သူ့ရဲ့အမြင်အရဆိုရင် အရာအားလုံးကို ဂဏန်းသင်္ချာနဲ့ ကိုယ်စားပြုဖော်ပြနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
“Bismillah- Al- Rahman- Al- Rahim” ဟာAbjad method အားဖြင့် ၁၉လုံးမျှသော အက္ခရာတွေရဲ့ Numerical value(ဂဏန်းတန်ဖိုး) တွေကိုရေတွက်ပြီး Aggregate (စုစုပေါင်း) လုပ်ထားတဲ့ total value တစ်ခုပါ။ အောက်ပါအတိုင်းအလွယ်တကူတွေ့နိုင်ပါတယ်။
“Bismillah- Al-Rahman- Al- Rahim”…
ဒါကြောင့်“၇၈၆” ဆိုတာဟာ ဟိုဟာဖြစ်စေ ဒီဟာဖြစ်စေရယ်လို့ ပါးစပ်ရာဇ၀င်နဲ့ ရေးခဲ့တာ မဟုတ်လောက်ဘူးဆိုတာတော့အားလုံးသဘောပေါက်မှာပါ။ “၇၈၆” ဆိုတာ ပေါင်းထားပြီးသား Numerical value တစ်ခုမို့လို့ထပ်ပြီးပေါင်းနှုတ်မြှောက်စားလို့လည်းမရတော့ပါဘူး။ “၂၁”ရာစုမှာ အစ္စလာမ်တွေကြီးစိုးမယ် ဆိုတာမျိုးကိုတော့ကျွန်မ ရှာမတွေ့သေးတာ အမှန်ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် “၇၈၆” ကို အသုံးပြုမှုတွေကတော့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကြား အကွဲအလွဲတွေ အများကြီး တွေ့နေရပါတယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ဟိန္ဒူတွေကလည်းHindu-Arabic Numeral system အရ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်တော်ဘုရားခရစ်ရှနားကို “၇၈၆” ရယ်လို့ ရည်ညွှန်းသုံးတာမျိုးရှိနေလို့ပါပဲ။ HaraeKrishna (Lord Krishna) ဆိုတာ “ကြီးမြတ်သော ကိုယ်တော်ခရစ်ရှနား” လို့ အနက်ကိုပေးပါတယ်။ဒါကို Numeral System နဲ့ရေးရင်….
ဒါကြောင့်အစ္စလာမ့်အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာတောင်မှပဲ “၇၈၆” အပေါ်ယူဆမှုတွေက ဒုနဲ့ဒေးကွဲလွဲနေတာပါ။ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကောင်းရာမွန်ရာတိုင်းကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့ နာမတော်နဲ့ အစပြုပြီးလုပ်ဆောင်တာဟာအစ္စလာမ်ရဲ့ အနှစ်သာရပါ။ ပြီးတော့ ကုရ်အာန်ကျမ်းကို စဖွင့်လျှင်ဖွင့်ချင်း (1:1) မှာကတည်းကိုကလှလှပပအစချီထားပြီးသားပါ။ ခိုးဆိုးလုယက်နဲ့နေရာမှာ၊ မုဒိန်းကျင့်တဲ့နေရာမှာ၊ လူသတ်တဲ့နေရာမှာဘုရားရဲ့နာမတော်ကို သုံးစွဲခွင့်မရှိပါဘူး။
“၇၈၆” နဲ့ “ဟာလာ” ဆိုတာလည်း မတူပါဘူး။ “ဟာလာ”ရဲ့အနက်က လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အရာတွေပါ။ အစ္စလာမ်ကခွင့်ပြုထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်၊စားပိုင်ခွင့်၊နေထိုင်ပိုင်ခွင့် စသည်ဖြင့်ကို ဟာလာနည်းကျတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဥပမာ- အစားအသောက်စားတော့မယ်ဆိုရင်မွတ်စ်လင်မ်တွေက “ဟာလာ”ရေးထားတဲ့ဆိုင်ကို ရှားစားကြပါတယ်။ အခြားအသုံးအဆောင်အတွက်ကျတော့ဝယ်ဖို့ခြမ်းဖို့က မိမိဝယ်ယူမယ့်သူ (ဆိုင်ရှင်) ကို ရွေးနေစရာမလိုပါဘူး။ အစားအသောက်အတွက်ကတော့သွေးတွေကို သန့်စင်ထားပြီး ဟာလာနည်းကျ လည်လှီးထားတဲ့ သားကောင်ကိုသာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကစားသုံးလို့ရတာပါ။ ကျန်တဲ့ ငါးဟင်းနဲ့ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်သီးသန့်ရောင်းသူများမှာ ဆိုရင်တော့ “ဟာလာ”ကို ရွေးဝယ်စရာမလိုတဲ့အတွက် ဘယ်သူ့ဆီကမဆို ၀ယ်လို့ရသလို ၀ယ်လည်းဝယ်ကြပါတယ်။
ဒါကိုလည်း လူတိုင်းသိပြီးသားပါ။ လူတစ်ယောက်ဟာသူ့အယူအဆနဲ့သူ ကြိုက်နှစ်သက်လို့ “၇၈၆” ဆိုတာကို လေထိုးကျွတ်ဖာဆိုင်မှာပါ ကပ်ထားလည်း သူ့လွတ်လပ်ခွင့်မို့ ပြောစရာကို မရှိတာပါ။ အစားအသောက်ကလွဲလို့ မွတ်စ်လင်မ်တွေက အဆင်ပြေရာဆိုင်တွေမှာကြုံသလိုဝယ်နေတာကိုလည်း အလွယ်တကူတွေ့မှာပါ။ ကျွန်မဆိုရင် ၀က်သား ဟင်းထည့်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တူတူတ၀ိုင်းတည်းထမင်းထိုင်စားလေ့ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုပြဿနာမျိုးမှ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် “၇၈၆”ဆိုတာ ဘုရားရဲ့ နာမတော်ရွတ်ဖတ်ခြင်း အပြည့်အစုံကို အာရဗီစာပေအားနည်းသူတွေအတွက် အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်အောင် တီထွင်ထားတဲ့ Numeral system တခုပါပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံက မွတ်စ်လင်မ်တွေ တီထွင်သုံးစွဲတာမဟုတ်တဲ့“၇၈၆” ကို ရုတ်သိမ်းခိုင်းစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ၇+၈+၆ = ၂၁ ရတဲ့အတွက် ၂၁ရာစုမှာ မွတ်စ်လင်မ်တွေ သိမ်းပိုက်စိုးမိုးမယ်လို့ ဦးဝီရသူအနေနဲ့ ကမ္ဘာကို အလျင်ဦးဆုံး ကြေငြာပြပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ ဦးဝီရသူကှို စာဖတ်ဖို့နဲ့ မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာမှုပြုဖို့ ကမ္ဘာကပြန်လည်တိုက်တွန်းနှစ်သိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျွန်မ အာမခံရဲပါတယ်။
ကျွန်မတို့ရဲ့ ကိုယ်တော် မုဟမ္မဒ် (ငြိမ်းချမ်းမှုသက်ရောက်ပါစေ)ကိုယ်တိုင်တောင်မှပဲ အခြားခေါင်းဆောင်တွေဆီ စာချွန်လွှာပေးပို့တဲ့အခါ ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုမူရင်း အာရဗီဘာသာနဲ့ပဲ ရေးထိုးပေးပို့လေ့ရှိတယ်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မအတွက်ကတော့“၇၈၆” ဆိုတာ ခုနှစ်ရာရှစ်ဆယ်ခြောက် ဆိုတဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကလွဲလို့ ဘာမှသက်ရောက် ခံစားရမှုမရှိပါဘူး။ “၇၈၆” ဆိုတာလည်း ကိုယ်တော့်ရဲ့ နောက်ပိုင်းမှ တီထွင်အသုံးပြုခဲ့တာပါ။ ကုရ်အာန်မှာလည်း“၇၈၆” အကြောင်း စိုးစဉ်းမျှ မပါပါဘူး။
ဒါကြောင့် ဦးဝီရသူအနေနဲ့ “၉၆၉” ဆိုတာကိုNumerical Value နဲ့မဟုတ်ဘဲ ဘုရားတရားသံဃာကို ဦးထိပ်ထားပြီး သုံးစွဲတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် ဘယ်သူ့ကိုမှ တွန်းထိုး တိုက်ခိုက်မှုမရှိတဲ့၊ တရားဓမ္မ အစစ်တွေကို ဟောကြားဖြန့်ဖြူးနိုင်တဲ့၊ငြိမ်းချမ်းမှုအစစ်အမှန်ကို ရှာဖွေနိုင်တဲ့၊ တရားမျှတမှုအတိပြီးတဲ့ လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ဦးဝီရသူပြောသလို ဘယ်သူ မှန်မှန် မှားမှား ဘယ်တော့မှ ပြန် ရုတ်သိမ်းစရာမလိုဘူးလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်အရ အကြောင်းအကျိုး အကောင်းအဆိုးဆိုတာရှိပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်တဲ့ကံ ကိုယ့်ဆီပြန်လာတတ်တယ် ဆိုတာကိုတော့ ဦးဝီရသူက ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်မှာပါ ။ လက်ကိုင်တုတ်ဆိုတာ ယိုင်နေသူအတွက် လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ သုံးတဲ့ပစ္စည်းပါ။ ယိုင်နေတဲ့သူကပြန်တည့်မတ်လာတဲ့တနေ့ လက်ကိုင်တုတ်ဆိုတာဟာ အလိုလို ထင်းဆိုက်ခံရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေ အများကြီးဆိုတာဘေးက ကြည့်နေသူတွေက သဘောပေါက်နေကြပါပြီ…..။
Tags: 786, 969, featured, wiratu